Windows Media Player bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu media Player n'etiti ndị mmadụ. Ọ na-abịa tupu arụnyere na windows sistemụ. E nwere ọtụtụ mgbanwe na ị pụrụ ime ka gị ẹdude windows mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ka na-agbanwe agbanwe ya akpụkpọ / isiokwu ma ọ bụ nbudata na ọhụrụ melite.
Nkebi nke 1: Gịnị bụ version nke Windows Media Player na windows 7/8?
Part 2: Olee iji gbanyụọ Windows Media Player na windows 7/8?
Nkebi nke 3: Video codec n'ihi na windo media ọkpụkpọ na windows 7/8
Nkebi nke 4: Olee otú ike omenala listi ọkpụkpọ na Windows Media Player 12?
Part 5: Olee ịrụzi windows media ọkpụkpọ na windows 7/8?
Ịmara version gị windows mgbasa ozi ọkpụkpọ dị ezigbo mkpa. Ọhụrụ version nke Windows Media Player bụ 12 na-abịa bụ tupu arụnyere na Windows 7 na 8. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịlele version gị Windows Media Player, ị pụrụ ime otú ahụ site na-eso ndị ngwa ngwa nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1: Mepee Windows Media Player wee pịa na enyemaka menu. Ọ bụrụ na ndị enyemaka menu adịghị anya, pịa Alt + H shortcut si gị keyboard.
Nzọụkwụ 2:-ahọrọ "Banyere" nhọrọ si enyemaka menu ma rịba ama ala version nke windows media ọkpụkpọ.
Windows Media Player na-abịa tupu arụnyere na windows sistemụ n'ihi ya, ọ bụkwa ndabara ọkpụkpọ. Otú ọ dị ma ọ bụrụ na ị na-achọghị iji nke a ọkpụkpọ, gị mgbe niile nwere nhọrọ iji gbanyụọ ya. Ị nwere ike / gbanyụọ ọ bụla inbuilt atụmatụ nke windows n'oge ọ bụla. Biko soro nzọụkwụ n'okpuru iji gbanyụọ windows media ọkpụkpọ na windows 7/8:
Nzọụkwụ 1: Mepee windows na ndepụta atụmatụ site akara panel
The nnọọ Nzọụkwụ mbụ bụ na-emeghe interface ebe ị pụrụ ịhụ niile ndepụta nke atụmatụ awa site windows. I nwere ike ime nke a site na-ahọpụta akara panel site na mmalite menu. Na-achịkwa panel, họrọ "omume" na mgbe pịa "atụgharị windows atụmatụ ma ọ bụ gbanyụọ".
Nzọụkwụ 2: Gbanyụọ windows mgbasa ozi ọkpụkpọ
Mgbe ị na-emeghe "n'aka windows atụmatụ ma ọ bụ gbanyụọ" nhọrọ, ị pụrụ ịhụ a ọnụ ọgụgụ nke inbuilt atụmatụ awa site windows arụ ọrụ usoro. Mkpa ka ị anya maka "media atụmatụ". N'okpuru "media atụmatụ", ị pụrụ ịhụ a igbe n'ihi na windo media ọkpụkpọ. Uncheck ya iji gbanyụọ windows mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ Anglịkan aka ya. Pịa na "ok" button itinye mgbanwe.
Codec bụ a pụrụ iche tinye on maka Windows Media Player na-enyere ọtụtụ ndị ọzọ maka ya. Ọ bụrụ na gị Windows Media Player bụghị ike igwu egwu ụfọdụ faịlụ formats, mgbe ahụ, na-agbalị iji a codec nke ga-edozi nsogbu a. A na-ahụkarị codec na-akwado ọtụtụ ndị ọzọ na faịlụ formats; nke bụ otu n'ime ndị isi uru nke na-eji codec na windows media ọkpụkpọ. Ebe a na-top 2 video codec maka Windows Media Player:
Media Player Codec Pack: The Media ọkpụkpọ codec mkpọ bụ otu n'ime ihe ndị kasị ọtụtụ ebe ada codec mkpọ na windows media ọkpụkpọ. Ọ na-akwado ọtụtụ ihe ndị ọzọ faịlụ formats dị ka VCDs na XCDs. Nke a codec mkpọ bụ n'efu na internet.
Windows 8 codec mkpọ: The windows 8 codec mkpọ bụ ihe zuru ezu ngwugwu fọrọ nke nta ka ụdị ọ bụla nke video. Nke a mkpọ bụ kpam kpam free na ị nwere ike mfe wụnye ya na gị windows media ọkpụkpọ na windows 8. a mkpọ nwekwara obụrede mbụre nke elu ntọala maka elu ọgwụgwụ ọrụ.
Listi ọkpụkpọ bụ n'ozuzu otu ìgwè nke song na-etinye ọnụ maka ịkpọ na ụfọdụ nyere ebe. Ị nwere ike ịmepụta gị onwe gị omenala playlist na Windows Media Player 12. Biko soro nzọụkwụ n'okpuru ike gị onwe gị omenala playlist na Windows Media Player 12:
Nzọụkwụ 1: Mepee windows mgbasa ozi ọkpụkpọ site na ịpị ya shortcut ma ọ bụ site na mmalite menu. Ịgbanwee gaa na ọbá akwụkwọ echiche wee họrọ "egwu" taabụ. Ị ga-ahụ song ndepụta na a ebi ndụ ma ọ bụrụ na i tinyeworị egwuri ụfọdụ songs. Pịa na "doro anya ndepụta" ikpochapụ niile songs.
Nzọụkwụ 2: Ugbu a, ị dị njikere na-amalite na-agbakwunye songs gị playlist. Ị nwere ike tinye a song gị playlist site na nri ịpị na song aha wee "gbakwunye" button. Họrọ "play ndepụta" nhọrọ ke "gbakwunye" menu ka ịgbakwunye song ọhụrụ gị play ndepụta. I nwekwara ike ịdọrọ na dobe songs ịgbakwunye ya na gị na ndepụta.
Nzọụkwụ 3: Ozugbo i kwukwara niile songs gị playlist, ị nwere ike mfe ịgbanwe otú ha iji. Ịgbanwe ka nke songs, dị nnọọ akpali ha elu ma ọ bụ ala.
Nzọụkwụ 4: Ozugbo ị nwere afọ ojuju na gị na ndepụta, ị nwere ike ịzọpụta gị egwu ọkpụkpọ site na-enye ya ihe kwesịrị ekwesị aha.
Nzọụkwụ 5: Ma ọ bụrụ na ị chọrọ igwu gị playlist, dị nnọọ pịa aha nke playlist na songs na ndepụta ga-amalite ebre. I nwekwara ike ịgbakwunye ọ gị ọkacha mmasị ndepụta.
E nwere ọtụtụ ugboro mgbe gị Windows Media Player ga-akwụsị na-aza ma ọ bụ ga-adaru ka anya dị ka ị na-emeghe ya. Ịrụzi dị otú ahụ ụdị nsogbu, mbụ ị mkpa ịmata ihe kasị akpata n'azụ ya. Ọtụtụ n'ime ndị Windows Media Player mbipụta na-metụtara ọbá akwụkwọ nsogbu. Ụfọdụ n'ime ụzọ ndị nke ị nwere ike ịrụzi gị windows media ọkpụkpọ na windows 7/8 bụ:
Usoro 1: Gbanyụọ na-enyere ndị ahụ mgbasa ozi ọkpụkpọ
Ọ bụrụ na gị Windows Media Player na-akpata nsogbu gị, ị pụrụ ịgbalị iji gbanyụọ ya site windows na ndepụta atụmatụ na mgbe ahụ nwee ọzọ. Usoro ga-akpali gị re-amalite mgbe enyere na mgbasa ozi ọkpụkpọ ọba akwụkwọ na-wuru ọzọ.
Usoro 2: na na-wuru mmezima ngwaọrụ
Windows abịa na a mmezima ngwaọrụ maka ya niile na programmụ na Windows Media Player bụghị isịneke a. I nwere ike ịgbalị ẹkedori nsogbu mgbe gị mgbasa ozi ọkpụkpọ ka jiri. Soro nzọụkwụ ke mmezima ngwaọrụ na ịrụzi gị mgbasa ozi ọkpụkpọ ngwa ngwa.
Free Ụzọ ka ịgbanwee Data si Nokia ka Windows Phone
Olee otú Naghachi ehichapụ Photos na Windows 8
> Resource> Windows> 5 Atụmatụ banyere Windows Media Player na windows 7/8